Nochevieja hoy ny Espaniola ary nanao ahoana ny teto Bira ? - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
“Réveillon de la St Sylvestre” no fety be mpankalaza indrindra ao anatin’ny taona. Andro lehibe manan-danja tokoa izy io ho an’ny firenena maro eran-tany. Samy manana ny fomba mampiavaka ankalazainy azy ny firenena isanisany. Hafa ihany koa ny anarany. Any Espainina ohatra dia “Nochevieja” no iantsoan-dry zareo ny fetin’ny faran’ny taona fa tsy “St Sylvestre”. Hafakely ny fankalazan’ny Espaniola ny fiandrasana ny taona vaovao, atombony amin’ny fiarahan’ny mpianakavy misakafo hariva aloha ka na patsabe ny laoka, na henan’ondry na vorontsiloza. Avy eo, samy manaraka ny ora eo amin’ny famantaranandro lehibe mipetaka amin’ny trano avo atao hoe “casa de correos”, afovoan’ny zaridaina ao Madrid renivohitra ny olona, ka eo no miandry izay igadonan’ny amin’ny 12 ora alina.
Efa lasa fomba fanao ankehitriny ny manao fihinanam-be sy korana rehefa mipaika ny 31 desambra, mba hitsenàna ny taona vaovao. Efa fomba fanao izany eto Madagasikara. Rehefa faran’ny taona ihany koa matetika no omena fahafaham-po ny tanora sy ny ankizy.
Vitsy ny hetsika sy ny seho teo an-tanàna fa tsy toy ny tamin’ny taon-dasa nisy mpanakanto maro. Nangaingaina ny mpiandry fety teo amin’ny garan’Antsirabe. Seh efa nanomboka nahazatra. Ny olona efa nanokana vola. Nivadika any an-kafa izany. Ny mpivarotra sy ny filalaovan’ny ankizy toy ny masinina kely, manezy, gorisa samihafa no nameno ny manodidina ny gara iny faran’ny taona 2014 iny. “Tsy maintsy mikipy kely aloha amin’ny vola mivoaka na dia sarotra aza ny fiainana, satria mba fety ny andro”, hoy ity renim-pinankaviana iray ity izay nitondra ireo zanany teny amin’ny lagara.
Tsy misy tsirony ny fety raha tsy misy ny vola enti-manomana sy hikarakaràna izany. Ny sasany aza, mahavatra misambo-bola sy mamorona ny tsy misy tokoa rehefa tonga ilay fotoan-dehibe. Mila fitsinjovana dieny mialoha mantsy ny fety mba hisian’ny fahombiazany sy ny hafaliana eo am-panatontosàna azy. Na iraha-mahalala aza fa sarotra ny fiainana dia ireo tanora sy ny ankizy tsy mahafantatra ny tsy misy. Ny zatovo indrindra no tena miandry ilay “revy”. Ny revy dia midika ho zava-pisotro, labiera izany raha ny etoBira manokana, sy ny tsaky mendimendy miaraka aminy.
Manantena fiainam-baovao hoentin’ny 2015
Maniry ny filaminana ny Malagasy. Antenaina fa ny Malagasy rehetra tsy ankanavaka izany. Filaminana eo anivon’ny firenena manontolo ary isam-mpianakavy koa. “Ny andron’ny faran’ny taona ihany dia nilamina ny disadisa teo amin’ny fianankavianay” hoy i Diamondra nibitabitaka. Nanamora izany ny fisian’ny fety natao ny alina tontolo. “Tsy ho very maina ny ezaka izay efa natao, fa hitohy ary hihatsara hatrany mandritra ny taona vaovao ho diavina” hoy izy. Tahaka an’i Diamondra teo anivon’ny fianakaviany dia samy mino ny ankamaroan’ny Malagasy fa hibaliaka amin’izay ny ho avy, marihana fa ny 1 janoary no andro eran-tany ho an’ny fandriam-pahalemana andrandraintsika tokoa. Maro no ny tsy nipi-tory. Be no tsindrin-daona te-hahita ny fiovàna marina sy mahitsy eto amin’ny firenena hiseho mandritra ity taona vaovao ity. Samia velon’aina hahafahana manao jery todika amin’ny 31 desambra 2015.